Zava-bita teo aloha : tsy mahazaka ny hivoahan’ny marina ny praiminisitra | NewsMada
Zava-bita teo aloha : tsy mahazaka ny hivoahan’ny marina ny praiminisitra
Tsy mahazaka tsikera sa matahotra ny hivoahan’ny tena marina ny praiminisitra sady minisitry ny Atitany sy ny fitsinjaram-pahefana, Mahafaly Solonandrasana Olivier?
“Be loatra ilay fanosoram-potaka. Izao no tiako hotenenina: aoka izay ny fanosoram-potaka, afa-manadihady isika”, hoy izy teny Anosy, omaly, momba ireo zava-bitany teo aloha.
Ohatra amin’izany ny hoe nanodinkodina vola amina miliara, araka ny nambarany. “Manasa anareo aho hanao fanadihadiana”, raha ny nambarany. Misy sampandraharaha iray ao amin’ny minisitera misahana ny famatsiam-bolan’ny fanjakana. Miantoka ny fanaovana tetikasa sy ny famatsiam-bola rehetra eny anivon’ireny vondrombahoakam-paritra itsinjaram-pahefana io.
Efa voatsara amin’ny zava-bitany teo aloha ny mpitondra
Fiangaviany ho an’ny vahoaka malagasy rehetra: avelao hiasa aloha ny governemanta, tsarao amin’ny asany izy, araka ny fanazavany. “Fantatro ny andraikitro, izay tokony hiadidiako”, hoy ihany izy. Tokony hatao amin’ny manaraka, arahi-maso amin’izay alehany ny minisitra: manao zavatra ara-dalàna sa tsia?
Mbola lavitra ny fifidianana, ary tsy manomana izany ny asan’ny praiminisitra na mitsabaka amin’ny raharahan-tokantranon’ny minisiteran’ny Atitany. Raha napetraka amin’ny toerany izy, ny tena imasoany: ahoana ny hampandrosoana an’i Madagasikara, ny hahazoana mpiara-miombon’antoka maro hanampy hialana amin’ny fahantrana.
Tokony hohadihadiana fa tsy vitavita ho azy amin’izao ny marina
Nahoana no faranana fotsiny amin’io “aoka izay” ny raharaha manohintohina mpitondra? Takina ny hisian’ny fanadihadiana lalina ny amin’izany. Na eny anivon’ny fitsarana izany fa tokony hitory izay voakasika raha manana ny marina, na eny anivon’ny parlemanta. Lazaina mandrakariva ny hoe tan-dalàna i Madagasikara, mahaleo tena ny fitsarana…
Tsy efa nanao fanadihadiana ve ny mpanao gazety vao namoaka ny fanodinkodinam-bolam-panjakana, raha tena nisy tokoa izany na tsia? Toy izany ny amin’ny hoe kolikoly amin’ny fidirana ho minisitra. Manginy fotsiny ny fifidianana nahabe fitarainana vahoaka indrindra, ny fifidianana loholona nahavaky vava ireo mpifidy vaventy…
Mila manaporofo ny maha olo-marina sy tena miasa ny mpitondra, fa tsy vitan-dresaka fotsiny…